Nhau - Ndeapi maindasitiri ari iwo mashandiro ehombodo yesimbi yekugadzirisa simbi inonyanya kushandiswa mukati, uye ndezvipi zvinodiwa chaizvo?
Ndeapi maindasitiri ari iwo mashandiro ehombodo yesimbi yekugadzirisa simbi inonyanya kushandiswa mukati, uye ndezvipi zvinodiwa chaizvo?
Ndeapi maindasitiri ari iwo mashandiro ehombodo yesimbi yekugadzirisa simbi inonyanya kushandiswa mukati, uye ndezvipi chaizvo zvinodiwa
Iyo jira simbi yekugadziriswa kwemidziyo goko rinonyanya kureva kuenderera mberi kwekugadziriswa kwemauto-gobvu mahwendefa, uye inogona kutamba basa rakanaka kwazvo mune ino maitiro. Nekuti zvikamu zvaro zvakagadziriswa zvine ruzivo, saka mumunda wese zvakakwezva vanhu kutarisisa, saka mukugadzirisa, isu tinofanirwa kunzwisisa mamiriro aya pamberi apo maindasitiri anonyanya kushandiswa.
Kuenderera mberi kwekuvandudza indasitiri yemagetsi yekutaurirana mumakore achangodarika inodawo kuwanda uye kugadzirisa matanho muzvinhu zvese, uye panguva imwechete ichave yakanyatsojeka, nekuti zvigadzirwa zviri mukugadzirisa zvinogona kusangana nezvinodiwa zvakanyanya. Kuvandudzwa kweindasitiri Zvakare zvakatarisana nemhedzisiro yakakura, mazhinji emakambani anozivikanwa epamba nekune dzimwe nyika anogona kunge aine kudiwa kwezvinhu izvi, saka hunyanzvi hwehunyanzvi hunonyanya kukosha.
Iko kuvandudzwa kwemafekitori indasitiri
Paunenge uchishandisa jira simbi yekugadzirisa yeiyo midziyo goko, iwe uchaona zvakare kuti akawanda mativi muelevhi indasitiri zvakare akajeka chaizvo. Munguva yekushandisa, pane akawanda marudzi ezvikamu, uye wese mukuru mugadziri achave nevazhinji vatengesi vanoita kugadzirisa nekuparadzira kwavo, saka isu tinofanirwa kutarisisa kune aya chaiwo mamiriro munguva, uye tigone kuziva dzimwe shanduko mune yese indasitiri. Izvi zvichave nemhedzisiro yakanaka kwatiri tese. Iyo inoshandiswa muminda yakawanda yakasiyana, saka sarudzo chaiyo inofanirwa kuitwa.
Post nguva: Sep-25-2020